Breaking news on the economy from Nepal and World
नुवाकाेटमा अालु उत्पादन गरेरै अर्बाैंकाे काराेबार
नुवाकोट । नुवाकोटमा यस वर्ष रु. १ अर्ब ११ करोड मूल्य बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । विस्तृतमा...
दरबारमा मार्गमा खुल्यो किंङस् लाउञ्ज,स्वादिष्ट परिकार र संगीतप्रेमीलाई उचित गन्तव्य
किन भित्रिँदैछ भारतीय कुखुरा र अण्डा अवैध रुपमा ?
काठमाडौं । शुक्रबार सुनको मूल्य १ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन ५९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार सयले घटेर प्रतितोला ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
लहान । सरकारले भारतीय बजारबाट कुखुरा र पक्षीजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सिरहाका विभिन्न बजारमा खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
नयाँ बर्ष २०७५ को अवसर पारेर राजधानीको दरबारमार्गमा अत्याधुनिक फेमिली रेष्टुरेन्ट ‘किंङस् लाउञ्ज’ सञ्चालनमा आएको छ । संगीतका साथै स्वेदेशी तथा विदेशी खानाका पारखीहरुलाई ध्यानमा राखेर पूर्ण पारिवारिक वातावरणमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याईएको हो ।
जितपुर । कपिलवस्तु जिल्ला पछिल्लो समय माछामा आत्मनिर्भर हुन लागेको छ ।
वालिङ । देशका विभिन्न शहरमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेका बेला स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले भने फोहरमैला बिक्रीबाट आम्दानी लिँदै आएको छ ।
फोक्सोमा धूलो कति छ ? क्लिनिक वान् मा गएर निःशुल्क जाँचनुहोस्
काठमाडौं । धुलोको मार खेपेर बसेका मानिसलाई लक्षित गरेर जावलाखेलको नोरख्याङ कम्पलेक्सस्थित ‘क्लिनिक वान्’ ले निःशूल्क फोक्सो परिक्षणको अफर ल्याएको छ । क्लिनिकले चिकित्सकिय भाषामा ‘पलमन्री फङसन टेष्ट’ (पिएफटी) भनिने फोक्सोको अवस्था बारे निःशूल्क परिक्षण गर्ने भएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा इन्टरनेटमार्फत सेयर किनबेचको आदेश लिन ब्रोकरहरुलाई निर्देशन
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्टरनेटमार्फत सेयर किनबेचको आदेश लिन ब्रोकरहरुलाई निर्देशन दिएको छ। धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई नयाँ नयाँ सालदेखि नै यस्तो व्यवस्था भनेको बोर्डले पुनः निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि सेयर खरिदबिक्रीको आदेश दिन ब्रोकर कार्यालय धाइरहनु पर्दैन।
भक्तपुर । भक्तपुरको सल्लाघारीमा सञ्चालन भइरहेको चौथो भक्तपुर औद्योगिक, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा व्यापार मेलामा तीन करोडभन्दा बढीको व्यापार भएको छ ।